သင်္ကြန် နှင့် သိကြားဖြစ်ရသော ဒုက္ခ – XB Media Myanmar
သင်္ကြန်ရောက်ပေပြီ။ သင်္ကြန်ဆိုသည်ကား သင်္ကန္တမှလာသည်။ ပြောင်းရွှေ့ခြင်းဟု အဓိပ္ပာယ်ရသည်။ မည်သည့်အရာကို ပြောင်းရွှေ့သနည်း? အတိတ်ဇာတ်ကြောင်းကား အသို့နည်း? လင်းပါမည်။ (ဟိုGroup ထဲက အလင်းမဟုတ်ပါ) သိကြားမင်း နှင့် ဗြဟ္မာမင်း စစ်ခင်းကြရာဝယ် သိကြားမင်းအနိုင်ရ၍ ဗြဟ္မာကြီး ဦးခေါင်းကို ရသည်။ အဆိုပါ ဦးခေါင်းကို ဘယ်နားမှလည်း ပစ်၍မတော်.. အကြောင်းကား လေထဲပစ်လျှင်လည်း သတ္တဝါတွေ ပျက်စီးသေကြေကြရမည်၊ ရေထဲပစ်လျှင်လည်း ရေတို့အငွေ့ပျံကြမည်၊ မြေပေါ်ထားလျှင်လည်း အနုမြူဗုံးထက်ပင် ဆိုးသွားနိုင်သေးသည်။ ထို့ကြောင့် သိကြားမင်းကား လက်ထဲသာ ကိုင်ထားရသည်။
သို့သော်.. ဘယ်သွားသွား ဦးခေါင်းတစ်လုံးကို ကိုင်သွားနေခြင်းက အဆင်မပြေတော့.. သိကြားနေရာ သင်ကိုယ်သင်ထား၍သာ စဉ်းစားကြည့်ပါ။ ဘယ်သွားသွား အိတ်တစ်လုံးကိုင်ရလျှင်ပင် ကြာတော့ ညောင်းချေပြီမဟုတ်လော.. သိကြားမင်းလည်း ထိုနည်းနှင်နှင်ပင်။ ထို့ကြောင့်ပင် ဗြဟ္မာကြီးဦးခေါင်းကို လက်လွှဲရန် လူရှာရတော့သည်။ အကြံကားရချေပြီ။ တစ်နှစ်လျှင် အစွမ်းထက် တန်ခိုးကြီး နတ်မင်းကြီး တစ်ဦးစီကို ကိုင်ခိုင်းလိုက်လျှင် သူသက်သာချေပြီမဟုတ်လော…
နတ်မင်းကြီးတို့ကား ကံဆိုးကြချေပြီ။ သို့သော် နတ်တို့သနင်း သိကြားမင်းဖြစ်၍ ဘာမျှမပြောသာ.. ကိုင်ဆို ကိုင်ပေးလိုက်ရုံပေါ့ဟုသာ သဘောထား၍ တစ်နှစ်တစ်ယောက်ပြောင်း၍ ကိုင်ကြသည်။ ကံကောင်းသည်ကား တစ်နှစ်တစ်ယောက်ပြောင်းရသည် ဆိုရာဝယ် နတ်တို့နှစ်မဟုတ်ဘဲ လူတို့၏ အချိန်ကာလ တစ်နှစ်ဖြစ်နေခြင်းပင်။ လူတစ်သက် နတ်တစ်မနက်ဟု ဆိုရိုးရှိသည်မဟုတ်လော..
နတ်မင်းကြီးတို့မှာ ဗြဟ္မာကြီးဦးခေါင်း ကိုင်ရသည်မှာ မကြာသော်လည်း နတ်တို့အချိန် စက္ကန့်ဝက်တိုင်း တစ်ခါ လွှဲပြောင်းရသည့် ဒုက္ခတော့ ရှိလေသည်။ မည်သို့ဆိုစေ.. သိကြားမင်း၏ အချစ်တော် လူသားများကတော့ ဗြဟ္မာကြီး ဦးခေါင်း မြေပေါ်မကျလာတိုင်း ပျော်ကြတော့သည်။ ကိုင်ဆောင်ရသည့် နတ်မင်းကြီးတို့ အေးချမ်းပါစေတော့ရယ်လို့ တစ်ဦးကို တစ်ဦး ရေလောင်းကြသည်။ တကယ်ပူလောင်နေရသည့်၊ လက်ညောင်းနေရသည့် သူတို့ကိုတော့ တစ်ဦးတစ်ယောက်ကမျှ ရေလာမလောင်း -_-
သိကြားမင်းကို ကယ်ခိုင်းဖို့ ကြည့်ပြန်တော့လည်း သိကြားမင်း ဒုက္ခကား မသေး.. အကြောင်းကား ထို လူ့ပြည်လူ့ရွာက လူတို့ကြောင့်ပင်.. သူတို့ တစ်နှစ်ပြည့်တိုင်း သိကြားမင်းမှာ လူ့ပြည်တစ်ခါဆင်းရရှာသည်။ ဘုန်းကံအလျောက်ပေါ်လာသည့် နတ်ရထားတို့ပင် မသုံးရ။ ခဏနေ နွားစီးပြီးဆင်းရ၊ ခဏနေ ဘီလူးစီးဆင်းရ၊ တစ်နှစ်တစ်နှစ်အလျဉ်မီအောင်လည်း သိကြားမင်းဘေးမှာ သတ္တဝါအစုံထားရရှာသည်။ လူတို့ တစ်နှစ်မှာ မည်သို့မျှ မကြာရကား သိကြားမင်းမှာလည်း ခုတက်၊ ခုဆင်းပင် ဖြစ်နေရှာတော့သည်။ ပဏ္ဍုကဗ္ဗလာမြကျောက်ဖျာ တင်းမတင်းကိုလည်း မသိနိုင်တော့… ကျောက်ဖျာပေါ်လည်း ဖင်ပူအောင်ပင် မထိုင်ရချေတကား.. ဒါကြောင့်ပင် လူတို့ရွာ၌ လူဆိုးတို့ပေါများလာခြင်းနှင့်တူသည်။ စစ်ပွဲတွေလည်း များလာသည်။ ဒါလည်း လူတို့မှာ သူတို့ကြောင့်မှန်း မသိရှာ.. သိကြားသာသနာဟုသာ ဆိုလို့ သိကြားကိုသာ အခါခါ တနေကြသည်။ သိကြားကား မအား…
မအားရသည့်ကြားထဲ အိမ်စာကပါလာသေးသည်။ သိကြားကိုတောင် အိမ်စာ ပေးနိုင်သော လူတို့၏အစွမ်းကား မသေး။ သိကြားမင်းမှာ လူ့ပြည်ဆင်းတိုင်း ပုရပိုဒ် နှစ်ခု ယူသွားရရှာသည်။ ခွေးသားရေဖြင့်လုပ်ထားသော ပုရပိုဒ်ကားတစ်ခု- ဤပုရပိုဒ်တွင်တော့ လူဆိုးများကို မှတ်ရသည်။ ရွှေပုရပိုဒ်ကား တစ်ခု – ဤ ပုရပိုဒ်တွင်တော့ လူကောင်းတို့ကို မှတ်သည်။ သို့သော် လူတို့မှာ ဟန်ဆောင်လိမ်ညာမှု၌ တစ်ဘက်ကမ်းခတ်ရကား သိကြားမင်း ဆင်းလာမည့်အချိန်တွင် အစွမ်းကုန် လိမ္မာပြလျက် သင်္ကြန်မတိုင်မီနှင့် သင်္ကြန်အပြီးတွင်ကား ဆိုးမြဲဆိုးလျက်ရှိလေရာ သိကြားမင်းလည်း ခေါင်းခြောက်ရလေသည်။ မည်သူ့ကို ရွှေပေလွှာထက်တင်၍ မည်သူ့ကို ခွေးသားရေ ပုရပိုဒ်ထဲ သွင်းရမည်မသိ..
ပိုဆိုးသည်ကား ဒီနှစ်ပိုင်းတွင် ခွေးသားရေ ပုရပိုဒ်ကို ရှာရခက်ခြင်းပင်။ ခွေးဆိုးတို့ ပေါများလှသော်လည်း ခွေးချစ်သူများ၏ အကာအကွယ်ပေးမှုကြောင့် သက်ဆိုးရှည်ကြသော်ငြား သေဆုံးပြီးသား ခွေးတို့ပင် အဘယ်ရောက်သွားသည်မသိ၊ သားရေမပြောနှင့် အရိုးပါ ရှာရခက်လေသည်။ နောက်ပိုင်းမှ ယမမင်းပြော၍ သိရသည်မှာ သေဆုံးပြီးသားခွေးတို့၏ ရုပ်အလောင်းတို့သည် ဆတ်သားခြောက်လည်း ဖြစ်ရရှာသည်၊ အမဲခြောက်လည်း ဖြစ်ရရှာသည်၊ ကြက်သားလုံးလည်း ဖြစ်ရရှာသည် ဟူသတတ်.. ယမမင်း၏ ဒုက္ခကလည်း မသေးလှဟု ကြားမိသေးသည်။ အဘယ်ကြောင့်နည်း။ ရိုးရာ အတာသင်္ကြန်ဟု ကြွေးကြော်ပြီး ရိုးရာမပျက် ရန်ဖြစ်ကြလေသည်။ မတော်တဆမှုတွေကလည်း များလွန်းလှသည်။ ယမမင်းနှင့် အပေါင်းအပါ သူ့လက်အောက်ငယ်သားတို့အတွက်တော့ သင်္ကြန်ကာလသည် တစ်နှစ်တာလုံးအတွက် အလုပ်အများဆုံးကာလပင်။
သိကြားမင်းအတွက် လူ့ပြည်သို့ ဆင်းရန်လည်း မလွယ်လှချေ။ လူတို့ကား သိကြားကို အတော်ဒုက္ခပေးသော အမျိုးပင်တည်း။ သိကြားမင်းမှာ လူ့ပြည်ကို ဆင်းချင်တိုင်းလည်း ဆင်းမရရှာ။ လူ့ပြည်ကို ခဏခဏဆင်းရမည်မှာ အလုပ်ရှုပ်၍ သုံးလေးနှစ်စာ တစ်ခါတည်း မှတ်မည်ဆို၍လည်းမရ.. အဘယ်ကြောင့်နည်း? လူတို့သတ်မှတ်ထားသည်မှာ သိကြားမင်း ဆင်းလာရမည့်နေ့သည် အကျနေ့ဖြစ်ပြီး ပြန်တက်မည့်နေ့သည် အတက်နေ့ဖြစ်ရမည်။ ထို့ကြောင့် သိကြားမင်းမှာ ဒုက္ခရောက်ရရှာသည်။ သူ့အတွက် စက္ကန့်ပိုင်းမျှ လွဲချော်သွားလျှင်တောင် လူတို့ ငြိုငြင်မှာ စိုးရသေးသည်။
ဘုရားလက်ထက်တော်ကတောင် သိကြား၊ နတ်တို့သည် သန်းခေါင်အချိန် လူရှင်းမှသာ ဆင်းလာပြီး တရားနာကြရရှာသည်။ အကြောင်းကား သိကြားတို့ နတ်တို့သည် လူတို့အနံ့ကို မခံနိုင်၍ ဟူသတည်း။ ယခုမူကား အခြားနတ်တို့မှာတော့ ဒုက္ခကင်းသည်။ သိကြားမင်းကား ဒုက္ခလှလှရောက်ရရှာသည်။ နဂိုကမှ လူအနံ့ကို မခံနိုင်ရသည့်ကြား သင်္ကြန်ကာလ လူ့ပြည်သို့ ဆင်းလာရသည့်အခါ အရက်သေစာ သောက်စားထားသည့် လူရမ်းကားတို့ကြားသွား၍ စာရင်းမှတ်ရသေးသည်။ နေ့ချင်းပြန် နတ်သက်ကြွေချင်စရာ အဖြစ်ပင်။ ယောက္ခမဖြစ်သူ အသူရာကပဲ မြှောက်ထိုးပင့်ကော်လုပ်ထား၍လားမသိ။ သူရာရည်တွေတော့ ဖောချင်းသောချင်း… နောက်တော့မှ ယောက္ခမ နဲ့လည်း တစ်ပွဲတစ်လမ်း အကဲစမ်းရချေဦးမည်။ သင်္ကြန်တွင်း နတ်သက်ကြွေချင်စိတ်ပေါ်လာအောင် လုပ်ထား၍….
လူတို့ကား သိကြားတို့ ဒုက္ခကို မသိ… သူတို့ဒုက္ခကို ကူညီဖြေရှင်းရန်သာ သိကြားမင်းကြွလာချိန်တိုင်းအတွက် လိမ္မာချင်ယောင်ဆောင်နေကြတော့သည်။
သိကြားဖြစ်ရသော ဒုက္ခကား မသေးလှချေတကား…..